कोभिड १९, लकडाउन र नागरिको लापरबाही सहर पसेकादेखि विदेश गएका अधिकांश गाउ फर्केका छन् । अर्को जोखिम के भने विदेशबाट आएकाहरूले अलिकति बुद्दिमानी नअपनाउने हो भने गाउँ झन् असुरक्षित बन्ने देखिन्छ । बिहिबार, चैत २७, २०७६
सचेतना फैलाउँदै नेपालका सामुदायिक रेडियो बुधबार, चैत २६, २०७६
कोभिड १९ – बदलिँदै पश्चिमा सभ्यताको परिभाषा मंगलबार, चैत ४, २०७६ स्वभाविक थियो । मानिसहरुमा त्रास छ । कसलाई कतिबेला कोरोना भाइरसले आक्रमण गर्छ ? कति समयसम्म यो त्रास रहन्छ ? अत्यावश्यक सामग्री अभावको संकेत प्रष्ट देखिइसकेको छ ।
नेपालमा कोरोना फैलिँदैन ! सोमबार, चैत ३, २०७६ नेपालमा चीनको उहान अथवा इटालीमा जस्तो कोरोना भाइरस फैलिन सक्ने अवस्था नभएकै हो त ?
स्ववियु नेतृत्वमा टीका लगाउने कि क्षमता चिन्ने ? आईतबार, माघ १२, २०७६ बितेका दस वर्षमा बागमतिमा धेरै पानी बग्यो । पाटन संयुक्त क्याम्पस गेटबाट सयौँ विद्यार्थी भित्रिए । त्यति नै विद्यार्थी बाहिरिए । केही विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । उनीहरूका कतिपय पूरा गर्नै पर्ने मागहरू पूरा भएका छैनन् । विद्यार्थी सङ्गठनले जति सके त्यति गरिरहेका छन् ।
कहिले माया टाँसिएझैँ गर्ने, कहिले छेवैमा नपर्ने बिहिबार, माघ २, २०७६ पार्टी एकताको सम्पूर्ण प्रक्रियाको चक्र पूरा भएपछि जिम्मेवारीलाई प्रष्ट पारेर जान खोजे पनि अहिले फेरि सभामुख छनौटले कहिले माया टाँसिएझैँ गर्ने, कहिले माया छेवैमा नपर्ने जस्तै भएको छ ।
अध्यक्ष ओली र प्रचण्डलाई घनश्याम भुसालको लिखित चुनौती बुधबार, पुस २, २०७६ एउटा राजनीतिक पार्टीले सामना गर्नुपर्ने अनगिन्ती समस्या हुन्छन् तर तिनको अध्ययन र समाधान भने विचार र सङ्गठनको एउटा निश्चित ढाँचाबाट गरिन्छ। अहिले समस्या नयाँनयाँ रुपमा आएका छन्।
चीन र नेपाल सम्मान र विश्वास गर्ने असल मित्र ३९ मिनेट राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीको निमन्त्रणामा म छिटै चीनको मैत्रीपूर्ण छिमेकी देश नेपालको राजकीय भ्रमण गर्दैछु । मैले नेपालको भ्रमण गर्न लागेको यो पहिलोपटक हो, तथापि मलाई नेपाल अपरिचित भने लाग्दैन ।
सम्झनामा कालिका सरको चड्कन ! मंगलबार, असार ३१, २०७६ आज पनि समय बेलाबेला कुनै अपरिचित सर भएर आउँछ । अरूलाई सन्तुलनमा राख्न मलाई थप्पड हान्छ । म रन्थनिन्छु र जिन्दगीको होमवर्क गरिरहन्छु तर अफिस कोठामा लगेर प्रेमले सम्झाउने कालिका सर भने कतै भेट्दिनँ ।
प्रचण्डको अभिव्यक्तिपछि नेकपामा तरङ्ग शनिबार, जेठ १८, २०७६ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नफर्किदै बैठक २ दिन पछि सरेको छ । सरकार र पार्टी चलाउने विषयमा बाहिर आएको अध्यक्ष प्रचण्डको भनाइ र लगत्तै त्योसँग जोडेर आउन थालेको नेताहरूको अभिव्यक्तिको असर बैठकमा परेको छ ।
कोदोको कथा शनिबार, चैत ९, २०७५ दोलखा भिमेश्वर नगरपालिको मकैबारी । चरिकोट नजिकैको गाउँ । म यहि गाउँका एकजना आमाबाट कोदोको कथा सुन्दैछु । मेरो आग्रहमा सहमतिको टाउको हल्लाउनुभयो । म कोदोको उरुङको पल्लो छेउमा बसेँ । उहाँले नाङ्लो बिसाउनुभयो । अनि सुरु भयो, कोदो, रोटी र ढिँडोको कुरा ।
बुहारी पत्रकारिता: विश्व सञ्चार जगतकै लागि नयाँ अभ्यास बुधबार, फागुन २२, २०७५ काठमाडौं । सञ्चार माध्यममा महिला पत्रकारको अभाव भैरहेको बेलामा यो अभियानले महिला पत्रकारको संख्या बढाउने काम गर्न सक्दछ ।
बाबुरामको दौरासुरुवाल बिहिबार, फागुन ९, २०७५ कर्णालीमा खस आर्यजस्तै देखिन मन लागेर जीवनमा पहिलो पटक दौरासुरुवालमा देखिएका भट्टराई के योभन्दा अगाडि खस, आर्य थिएनन् । ? कर्णाली क्षेत्रमा भट्टराई कति पटक गए होलान् ? सायद उनी आफैँलाई औँला भाँचेर गन्दा पनि एकिन गर्न कठिन पर्ला ।
जापानको लोभलाग्दो शिक्षा प्रणाली नेपालका लागि सिकाइ सोमबार, माघ २८, २०७५ सरसफाइ, सदाचार र देशप्रेमसहितको विकासको मूल फुटाउनुपरेको छ । हो, यहाँबाट नै समाजको दीर्घकालीन बदलाव सम्भव छ । यसर्थ, बालबालिकाहरूलाई इमान्दारी, पौरख र सीप दिनुपर्छ । आमूल परिवर्तनको आधार शिक्षा नै रहेछ । यसतर्फ सबैको ध्यान जानु आजको आवश्यकता बनेको छ ।